बाइबलका कथाहरू: पहिलो इन्द्रेनी - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
जहाजबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै नूह र उसको परिवारले सबैभन्दा पहिला के गऱ्यो, तिमीलाई थाह छ? उनीहरूले परमेश्वरलाई भेटी अथवा उपहार चढाए। तल चित्रमा नूहले भेटी चढाइरहेको हेर त। आफ्नो परिवारलाई परमेश्वरले ठूलो जलप्रलयबाट बचाउनुभएकोमा धन्यवाद दिन नूहले जनावरहरू उपहार चढाएको थियो।
के तिमीलाई यो उपहार पाएर परमेश्वर खुसी हुनुभयो जस्तो लाग्छ? हो, उहाँ असाध्यै खुसी हुनुभयो। त्यसैले यो पृथ्वीलाई फेरि जलप्रलय ल्याएर कहिल्यै नाश गर्नेछैनँ भनेर उहाँले नूहसित प्रतिज्ञा गर्नुभयो।
चाँडै जमिन पूरै सुक्खा भयो। त्यसपछि नूह र उसको परिवार जहाजबाहिर बस्न थाल्यो। परमेश्वरले उनीहरूलाई आशिष् दिनुभयो र भन्नुभयो: ‘तिमीहरूले अब धेरै छोराछोरी जन्माएर पृथ्वी भर्नुपर्छ।’
तर पछि-पछिका मान्छेहरू फेरि ठूलो जलप्रलय आउला भनेर डराउन सक्थे। यसैले परमेश्वरले पृथ्वीमा फेरि कहिल्यै जलप्रलय ल्याउनु हुनेछैन भनेर मान्छेहरूले सम्झिराखून् भनी एउटा चिह्न दिनुभयो। त्यो चिह्न के थियो, तिमीलाई थाह छ? त्यो इन्द्रेनी थियो।
पानी परेर घाम लागेपछि आकाशमा अक्सर इन्द्रेनी देखिन्छ। इन्द्रेनीमा थुप्रै सुन्दर रङहरू हुन्छन्। के तिमीले कहिल्यै इन्द्रेनी देखेका छौ? इन्द्रेनी कस्तो हुन्छ चित्रमा हेर त।
परमेश्वरले त्यसपछि यसो भन्नुभयो: ‘सबै मान्छे र जनावरलाई जलप्रलय ल्याएर म फेरि कहिल्यै नाश गर्नेछैन। म मेरो इन्द्रेनी बादलमा राख्दैछु। इन्द्रेनी देखा परेपछि म त्यसलाई हेर्छु र आफूले भनेको कुरा सम्झन्छु।’
अब भन, इन्द्रेनी देखेपछि तिमीले पनि के सम्झनुपर्छ? हो, परमेश्वरले फेरि कहिल्यै जलप्रलय ल्याएर पृथ्वीलाई नाश गर्नु हुनेछैन भनेर सम्झनुपर्छ।
उत्पत्ति ८:१८-२२; ९:९-१७.
जहाजबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै नूहले सबैभन्दा पहिला के गऱ्यो, चित्र हेरेर बताऊ।
जलप्रलयपछि परमेश्वरले नूह र उसको परिवारलाई के आज्ञा दिनुभयो?
परमेश्वरले के प्रतिज्ञा गर्नुभयो?
इन्द्रेनी देख्दा तिमीले कुन कुरा सम्झनुपर्छ?
उत्पत्ति ८:१८-२२ पढ्नुहोस्।
आज हामी कसरी यहोवालाई “मीठो बासना” चढाउन सक्छौं? (उत्प. ८:२१; हिब्रू १३:१५, १६)
मानिसको हृदय कस्तो छ भनेर यहोवाले देख्नुभयो र त्यसकारण हामी कुन कुरादेखि होसियार हुनुपर्छ? (उत्प. ८:२१; मत्ती १५:१८, १९)
उत्पत्ति ९:९-१७ पढ्नुहोस्।
पृथ्वीका सबै प्राणीहरूसित यहोवाले कस्तो करार बाँध्नुभयो? (उत्प. ९:१०, ११)
इन्द्रेनीको करार कहिलेसम्म कायमै रहनेछ? (उत्प. ९:१६)